नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिका, प्रथम साधारण-सभा, अप्रिल २२, २०१७, मनासस भर्जिनिया महासचिवको प्रतिवेदन आदरणीय सभापति ज्यू - Enepalese.com
नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिका, प्रथम साधारण-सभा, अप्रिल २२, २०१७, मनासस भर्जिनिया महासचिवको प्रतिवेदन आदरणीय सभापति ज्यू
इनेप्लिज २०७४ वैशाख २९ गते १२:२६ मा प्रकाशित
नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको महासचिवको हैसियतले म सर्वप्रथम यस गरिमामय साधरण–सभामा उपस्थित अग्रज, सल्लाहकार, च्याप्टर सभापति, महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं पर्यवेक्षक, संस्थाका कृयाशिल र साधरण सदस्यहरू, सबैलाई सभाको यस बन्दसत्रमा हार्दिक स्वागत गर्न चाँहन्छु । प्रत्येक अधिवेशन, भेला र सम्मेलनहरू भनेको संगठनको विगतका कृयकलाप र गतिविधिको सिंहावलोकन गरी आगामी लक्ष्य, दिशा र दृष्टि सुस्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्ने स्थलहरू हुन् भने, विगतका विसंगति र विकृतिहरूलाई केलाएर आउँदा दिनहरूमा ती कुराहरू नदोहर्याउन प्रण गर्ने थलो पनि हो । त्यसैले हाम्रा राम्रा र नराम्रा कुराहरूको समिक्षा गर्दै, सिंगो संगठनका हितका निमित्त नवीन विचारहरू माथि यस साधारण–सभामा वृहत छलफल हुनेछ भन्ने आशा राख्दै, संस्थाको विगतका गतिविधि, वर्तमानका परिस्थितिहरू र भावीकार्य दिशाकाबारेमा समेटेर तयारपारेको मेरो प्रतिवेदनलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाँहन्छु।
आज भन्दा चार दशक अगाडि सन् १९७६ जुन १३ गते लोकतान्त्रिक समाजवादका प्रतिपादक जननायक विशेश्वर प्रसाद कोइरालाको प्रत्यक्ष निगरानीमा भारतको मुम्बई शहरको एउटा सानो कोठामा नेपाली जनसम्पर्क समितिको स्थापना भएको कुरा हामी सबैलाई अवगत नै छ । के एस रावल संस्थापक सभापति रहेको सो समितिले त्यस पछिका दिनहरुमा भारतको विभिन्न राज्यहरुमा आफ्नो संगठन विस्तार गरेका थिए । यो संस्था जन्मिएको मुम्बई शहरमा नेपाली जनसम्पर्क समितिको अहिले पनि एउटा छुट्टै अचल सम्पत्ति छ । यसरी जनसम्पर्क समिति स्थापना भएको लगभग ४० वर्षको अवधिमा विश्वका ३४ वटा देशहरूमा यसले आफ्नो संगठन विस्तार गरिसकेका छन् । संगठन विस्तारकै क्रममा अमेरिकामा पनि करिब एक दशक अगाडि यस संस्थाको विधिवत् रूपमा स्थापना भएको कुरा हामी सबैमा जगजाहेर छ । टेक्सास राज्यको डलास शहरमा दर्ता भएको संस्था “नेपाली पव्लिक रिलेशन कमिटी अमेरिकाको ” (NPRCA ) सन् २००७ सेप्टेम्बर, २/३,गतेमा न्यू-ईग्गल्याण्डको हार्डफोर्ट कनेटिकटमा भएको अधिवेशनबाट सभापतिमा डा. सुरेन्द्र देवकोटा निर्वाचित भएका थिए भने, न्यू-योर्क राज्यको न्यू-योर्क शहरमा दर्ता भएको संस्था “नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको सन् २००८ नोभेम्बर २८/२९ गतेमा कुईन्सको अस्टोरियामा भएको अधिवेशनबाट सभापतिमा आनन्द बिष्ट निर्वाचित भएका थिए । यसरी सुरूका दिन देखि नै यस संस्थाको आन्तरिक जीवन सहज ढंगले चल्न सकेन । संगठनमा अनेकौं उथलपुथल आए। लामो समयसम्म संगठन शिथिल बन्न पुग्यो। यसबाट संगठन मात्र जाम भएन प्रत्येक नवीन विचार र अभियान प्रति कृत र पराजित बनिरहे। कालन्तरमा गएर दुई वटै समितिले संस्थाको एकताको खातिर एक भएर जाने निर्णय गरेपछि, सन् २००९ अक्टोबर, ३१ गते न्यू-जर्सी राज्यमा भएको दुई पक्षिय वार्ताले टेक्सास राज्यको डलास शहरमा दर्ता भएको संस्था “नेपाली पव्लिक रिलेशन कमिटी अमेरिकालाई (NPRCA) मानेर जाने आपसी सहमतिगरेर, खगेन्द्र जिसीको संयोजकत्वमा एउटा अधिवेशन तयारी समितिको गठन गरेको थियो । सो समितिले जम्मा १६ वटा च्याप्टर गठन गरी एकताको अधिवेशन गराउनमा जुट्यो तर विविध कारणले सकेन । त्यसपछि पार्टीले विष्णु सुवेदी संयोजक भएको एक अधिवेशन तयारी समिति गठन गर्यो । उक्त समितिले नयाँ र पुराना गरेर जम्मा २४ वटा च्याप्टर विस्तार गर्न सफल भयो। अन्तत:सो समितिले संस्थाको करिब दश वर्षे लामो आन्तरिक विवादलाई अन्त्य गर्दै, सन् २०१४ नोभेम्बर २२/२३ गते टेक्सास राज्यको डालस शहरमा एकताको दोश्रो अधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो । यस अधिवेशनले तीन वर्षको लागि सभापतिमा आनन्द बिष्ट समेतगरेर जम्मा २९ जनाको कार्यसमितिलाई निर्वाचित गराएको समितिमा ६ जना मनोनीतथपेर जम्मा ३५ जनाको कार्यसमिति नै अहिलेको नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको वर्तमान कार्यसमिति भएको कुरा यहाँहरू माझ राख्न चाँहन्छु ।
१.नेबि संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य स्वा.बिष्णुहरी भण्डारीको आकस्मिक निधन भएकोले परिवारलाई सहयोग गरेको छ । २.नेबि संघका पूर्व महामन्त्री एवं नेकाका युवा नेता उमेश जंग रायमाझीलाई कलेजो प्रत्यारोपनका लागि:-रू तीन लाख सहयोग गरेको छ। ३.नेजस अमेरिकाको केन्द्रीय सदस्य सुभेन्द्र रानाभाटको धर्मपत्नि दुर्गा पाठक रानाभाटको क्यान्सर रोगको उपचारको लागि रू दुई लाख सहयोग गरेको छ । ४.नेपाली काँग्रेस पार्टी कार्यालयमा वनारस नै देखि लगातार काम गर्दै आउनु भएका दाई मोहन कुमार खत्री र साडे तीन दशकदेखि कामगरेर आउनु भएका सुरेश श्रेष्ठ ” कान्छा” दुबै जना बिमार भएकाले उपचारको लागि जनही रू पचास हजारको दरले एकलाख सहयोग गरेको छ । ५.नेबि संघको पूर्व महामन्त्री शीव भुर्तेललाई क्यान्सरको उपचारको लागि सहयोग गरेको छ । ६.नेपाल महिला संघको डिवी परियारलाई रू पचास हजार सहयोग गरेको छ । ७.गिरीजा प्रसाद कोइराला मेमोरियल कलेज मार्फत गागल फेदीका भुकम्प पिडित बालबालिकालाई छात्रावृतिको लागि संस्थाले सहयोग गरेको छ । ८.भुकम्पले क्षतिग्रस्त गागल फेदी उच्च माध्यमिक विध्यालय निर्माणका लागि रू सात लाख पचास हजार सहयोग गरेको छ । ९.दोलखा जिल्लामा सितलहरमा परेकालाई चार लाख पचासहजार बराबरको कम्बल वितरण गरेको छ । १०.भुकम्प गएको वेलामा नेपाल पुगेर संस्थाको सभापति आनन्द बिष्ट, उपसभापति धर्म राज श्रेष्ठ, सचिव ईश्वर सापकोटा र केन्द्रीय सदस्य हरीवोल भण्डारीद्वारा प्रत्यक्ष वितरण गरेको राहत सहयोगरकम जम्मा रू. (९१३०५०) नौ लाख तेह्रहजार पचास रहेको छ ११.नेपाली काँग्रेसको भुकम्प पिडित राहतकोषमा रू. (१८,००,०००) अठार लाख रूपैंया पहिलो पटक र (३१, ४७,६५०) एकतिस लाख सच्चालिस हजार छसय पचास रूपैया दोस्रो पटक जम्मा गरेको छ ।
नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको संगठन विगत लामो समय देखि राम्ररी चल्न सकेको छैन। कुनै न कुनै कोणबाट संस्थाको जीवनमा निर्मम प्रहारहरु भइरहेका छन। यस त्रुटीलाई हटाउनको लागी यो साधारण-सभाबाट विद्यमान विधान र च्याप्टर गाइडलाइनमा संशोधनका लागि प्रस्ताव गरी एकरुपता ल्याउनु पर्छ। त्यस पछि संस्थाको संगठन ठीक बनाउने हो भने विधानको पूर्ण रुपले पालना गर्ने बानी हामी सबैमा हुनु पर्छ । अनि मात्र संगठनको दैनिक जीवनको कार्यहरु सुचारु रुपले सम्पन्न हुनेछ। अर्को कुरा संस्थालाई संगठित राख्ने सवल आधार भनेको अनुशासन पनि हो । त्यसैले संगठन भित्र अनुशासन कायम राख्न हामी सदैव सजक रहनु पर्छ । यसका साथै संस्थालाई अझ बलियो र एक ढिक्का बनाइ राख्न संगठनको आन्तरिक लोकतन्त्रमा विशेष जोड दिनु पर्दछ। निर्णय प्रक्रियामा लोकतन्त्रको भरपूर उपयोग गर्न सबैले पाउनु पर्छ। संगठनमा सामन्ती संस्कार, आत्माकेन्द्रीत मानसिकता, कर्मचारीतन्त्र र धनी व्यक्तिहरूहाबी हुनु भनेको स्वागत योग्य कुरा हुँदै होईन। यसबाट संगठनलाई सधैं बचाइ राख्नु पर्दछ। अहिलेको आधुनिक युगमा पार्टी तथा कुनै पनि संस्थाको संगठनहरुमा निम्न: विशेषताहरुलाई क्रमिकरुपले समावेश गर्दै लगेको देखिन्छ। १) पारदर्शिता २) उत्तरदायित्व ३) लोकतान्त्रिक आधारमा संस्थाहरुको संगठन र अन्य संस्थाहरुसँगको सम्बन्ध ४) समावेशीकरण ५) संस्थाको कोषको लोकतान्त्रिकरण ६) निर्णय प्रक्रियामा तल्लो तहमा रहेको व्यक्तिहरू समेतको समान सहभागिता ७) संगठनको आन्तरिक बहसमा लोकतान्त्रिक तवरले निर्णय गर्नु पर्ने ८) विचार विमर्श ९) हरेक तहमा नेतृत्वको आवधिक निर्वाचन १०) एउटा सु-संगठित राजनीतिक कार्यक्रम ११) संस्थाको विधान वा आचार संहिता १२) संस्थालाई आन्तरिक सुधार १३) नागरिक शिक्षा १४) भ्रष्टाचारविरुद्धमा तालिम लगायत छन् । महिला, युवा, अपाङ्ग, आदिवासी जनजाति सिमान्तकृत ,दलित र मधेसीको सहभागिताको आवाज पनि अहिले उत्तिकै घनिभूत ढंगले उठेका छन्। यसका साथै, संस्थाको कोषलाई पारदर्शी ढंगले सन्चालन्, लेखापरिक्षण र सार्वजनिकीकरण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय आक्षेपहरूबाट पनि संगठनलाई सधैं अलग राख्नु पर्छ । यिनै कुराहरुको कमिका कारण संस्थामा विभाजनको पिडाबोध, घात अन्तरघात, अलगावबादी झुकाव र छुट्टै संगठन गठन गर्ने क्रियाकलापको पुनरावृति हुन्छन् । जसका कारण आफ्नै संस्था भित्र एक अर्काको व्यक्तित्वलाई समाप्त पार्न समय र शक्ति खर्च गरिरहेको हुन्छ । यसो गर्दा नेतृत्व विकास ठप्प हुन गै संकटकालिन अवस्थामा संस्थालाई आवश्यक पर्ने कार्य क्षमता र सुधृढ नेतृत्वको सधैं संकट भएको पाउछौं। त्यसकारण निचोडमा भन्ने हो भने संस्थाको व्यापक हितको खातिर कुनै पुर्वाग्रह र दुराग्रह नराखी पर्याप्त वैचारिक बहसको आधारमा लोकतान्त्रिक प्रकृया मार्फत नेतृत्व छनोट गर्ने परम्परा बसाल्नुर्छ। आजको विश्व व्यापारिकरणको युगमा संस्थाहरु सिमित घेरामा मात्र बस्न चाहदैनन। संस्थाहरुले एक अर्काबाट धेरै नीति र कार्यक्रमहरु ग्रहण गरी राखेको हुन्छ । त्यसैले संस्थालाई कसरी लोकतान्त्रिकरण, सामाजिकिकरण र आधुनिकिकरण बनाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि हाम्रो पुरै ध्यान जानु पर्दछ ।
मुलत संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न भएपछि राजनीतिक विषय वस्तुहरूको अन्त भैसकेको समयको रुपमा लिएको छ । इतिहासको ती दिनहरुको कुशल नेतृत्व गर्न सफल काँग्रेस पार्टीले नै आजको समृद्ध राष्ट्र निर्माणको प्रयत्न गर्नु पर्छ । यो प्याराडाइम शिफ्टको समय हो । लोकतन्त्रको अभ्यास सहज भैसकेको अवस्थामा अब आर्थिक विकास नै एक मात्र अपरिहार्य विषय हो । लोकतन्त्र स्थापनाको लागि हिज जुन ढंगले लडियो त्यो संगठितपनाका साथ आज आर्थिक विकासको पक्षबाट देशलाई हाँक्नु छ । नेपाली काँग्रेस पार्टीले विपी कोइरालाको पालादेखि नै समाजवाद आर्थिक नीतिको रुपमा बोकेको छ । हामी समाजवादबाट नै हाम्रो देशको समुन्नति खोजिरहेका छौ । समाजवादको परिभाषा बदलिएको छ । तर आज त्यही समाजवादको विषयमा बृहत्तर छलफल गरेर अगाडि बढन जरुरी भैसकेको छ । नवउदारवादी राजनीति र अर्थनीतिको आगमले वैचारिक र व्यवहारिक राजनीतिकोसँगै उदय गराएको छ । जहाँ बजार सामु राज्यले घुडाँ टेक्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरू अहिले विश्वमाहाबी हुदै जानुले त्यो संकेत गर्दैछ। त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिदैं जानु पर्छ । हिजका हाम्रो सरकारले गरिबि न्युनिकरणमा, विकेन्द्रीकरणमा, पिछडिएको क्षेत्र, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको जगेर्ना र उत्थानमा कतिको काम गर्न सक्यो । तल्लो या पिँधको तहसम्म चेतनाको कामहरु कति हुन सक्यो । अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जाति, भाषाको सवालमा कति संरक्षण संवर्धन र राज्यको सवालमा कति समावेशी काम हुन सक्यो , तल्लो तहको व्यक्तिगरूले लोकतन्त्रको कति उपभोग गर्न पायो। यी कुराहरुको समिक्षाले समाजवादको सवालमा कति काम हुन सक्यो या सकेन भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । यस्ता समिक्षाले नै आज नेपाली काँग्रेस हिड्ने बाटोतय गर्छ । नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिका त्यही राज्य सन्चालन् गर्ने राजनीतिक पार्टी नेपाली काँग्रेसको भ्रातृसंस्था भएकोले संगठनमा लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता, उत्तरदायी राजनीतिक कार्यक्रम, उत्कृष्ट आर्थिक नीति समावेशीकरण र सामाजिक गतिशीलता अवश्यम्भावी भएको कुरा कसैले नकार्न सक्दैन । अहिले मुलुकले करिब सात दशकपछि लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अंगाल्दै संविधान निर्माण गरेको छ । यसरी निर्माण गरिएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न कोसेढुंगाको रूपमा १९ वर्ष पछि हुन लागेको मुलुकको स्थानीय चुनाव उभिएको छ । त्यसैले त्यो निर्वाचनलाई सफल बनाउनका निमित्त नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाले पूर्ण रूपले सहयोग गर्नु पर्छ । हाम्रो देश नेपाललाई वर्तमान राजनीतिक उल्झनबाट निकाल्न अतिवादी सोचले नभइ काँग्रेसको मध्यमार्गी विचारले मात्र सक्ने एवं कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका आपसमा स्वतन्त्रढंगले काम गरेर जानु पर्ने स्पष्ट धारणा समेत जनसम्पर्क समिति अमेरिकाले राखेरजानु पर्दछ । नेपाली जनसम्पर्क समितिको प्रतिपादक जननायक विशेश्वर प्रसाद कोइरालाले देशमा भन्दा विदेशमा ज्यादा समय बिताएका थिए। तर हाम्रो देश नेपाल अहिले तिनै जननायक विपिले कोरेको राजनीतिक विचारको गोरेटोमा हिडिरहेको छ । यो आधुनिक युगमा नवीन दृष्टिकोण र कार्यक्रमले राज्य सन्चालन् हुन्छ । त्यसैले विदेशमा छु भनेर, हामीले बढी उदासीन भएर विरक्तिने काम छैन। विदेशमा नै बसेर पनि समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा विशेष योगदान पुर्याउन सकिन्छ। विदेशमा नै बसेर पनि नेपाल राष्ट्रको गौरव, समृद्धि र उन्नतिका लागि थुप्रै नवीनकार्यहरु हामीले गर्न सक्दछौं। नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकालाई अब त्यस दिशातिर डोर्याउनु पर्दछ ।